प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदद्धारा सरकारको ध्यानाकर्षण, कसले के भने ? – Khabar Aajako
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदद्धारा सरकारको ध्यानाकर्षण, कसले के भने ?
आजको खबर | प्रकाशित : २०७५ साउन ३० गते ६:३९
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाली काँग्रेसका विमला नेपालीले देशभरका दलित दिनप्रतिदिन प्रताडित भएको गुनासो गर्दै त्यस्तो अमानवीय व्यवहार अविलम्ब अन्त्य हुने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन ।
सोही पार्टीका भरतकुमार शाहले सप्ताह भन्ने पण्डितदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई करको मारमा पारिएको गुनासो गर्दै करका कारण सङ्घीयता जोखिममा नपरोस् भने ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका भुपेन्द्रबहादुर थापाले वर्षाका कारण बेनी–जोमसोम बाटो अवरुद्ध भएकाले त्यसलाई खुलाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सोही पार्टीका महेश्वरजंग गहतराजले मधेश आन्दोलन र जनआन्दोलनका घाइतेको भरणपोषणको प्रबन्ध गर्न माग गरे।
नेपाली काँग्रेसका मीना सुब्बाले जनतालाई महसुस हुने गरी मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबाट काम प्रारम्भ भएकामा अहिले त्यो सुस्ताएको आरोप लगाईन्। सोही पार्टीका रंगमती शाहीले हुम्ला र डोल्पामा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा केन्द्र तोक्न आग्रह गरिन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका रेखा शर्माले वर्षायाममा विकास–निर्माणका काम गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने र निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् । सोही पार्टीका लक्ष्मीकुमारी चौधरीले गरीबको परिचयपत्र खास गरीबले नपाएकाले त्यसको छानबिन गर्न माग गरिन्।रासस
२०७५ साउन ३० गते ६:३९ मा प्रकाशित
सङ्घीयता बलियो बनाउन आफैँ लाग्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
नेपालगञ्ज उडेको बुद्ध एयरको विमान धनगढीमा, गोरखाबाट उडेको हेलिकोप्टर सिउरेनीटारमा
प्रधानन्यायाधीश जबराको घोषणा – न्यायाधीश जोशीलाई पेशी नतोकिने
कञ्चनपुरमा पहुरा र नृत्यसहित थारु समुदायको टीका